Noely 2003 - Fizaràna voalohany
Accueil Ireo Sampana Sekoly Alahady Noely 2003 - Fizaràna voalohany
Publication : 28 décembre 2003
Fa Mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tananan ?I Davida dia Kristy Tompo Lioka 2 11
Andro malaza sady soa tokoa ny andro izay nahatongavan ?ilay Mesia.
Somebiseby toy izany ery ireo ankizy ao amin ?ny Sampana Sekoly Alahady tamin ?ny andro nankalazana ny fahatsiarovana ny nahaterahan ?ilay Mesia. Nahatratra dimapolo ireo ankizy nandray anjara nanatanteraka izany fety masina izany. Nandritra ny fankalazana dia tamin ?ny alalan ?ny tsianjery sy hira ary kilalao an-tsehatra no nanambarany ny tantara nahaterahan ?i Jesoa Kristy. Nasehon ?ireo ankizy tamin ?izany ny antony nandaozan ?i Jesoa Kristy ny Rainy ka nahatongavany tety an-tany nohon ?ny fitiavany ny zanak ?olombelona ; mba hitady sy hamonjy ny very. Feno hafaliana tanteraka ireo zoky sy Ray amandReny raha nandray ny lesona nampitain ?izy ireo tamin ?io fotoana io.
Toy izao ireo tsianjery natolotry ny ankizy tamin ?izany :
Fifaliana ho anay Sekoly Alahady Ny miarahaba anareo sahady Na zoky na zandry, na Ray aman-dreny Arahaba, arahaba no voalohan-teny
Arahaba ry havana izay manoloana Fa tratr ?ity andro firavoravoana ! Andro malaza dia ny andro Noely
Arahaba ry olona mbola variana Aviaisika hiombona ?ty fifaliana ! Fa tonga ho anao ?lay Tompo Jesoa Ka dia hararaoty, vohay re ny fo !
Arahaba, arahaba, arahaba hatrany Ry olon-drehetra eto ambonin ?ny tany ! Fa ?lay Andriamanitra Tompon ?ny hery No indro fa tonga hamonjy ny very.
Satria velon ?aina notahian ?ny Avo Ka tafahoana samy ravoravo Tratry ny Noely, indro izao tonga Arahaba, arahaba, hoy ?reto kilonga Arahaba isika satria velon ?aina
Ka afa ? mifaly ny fo sy ny saina ! Hadino ?lay fiainana mahasorena Mamiko, mamiko noho ny tantely Satria nirotsahan ?ny famonjena.
Arahaba ry olona mahantra rehetra ! Arahaba satria androany no fetra ! Fetra ifaranan ?ireo fijaliana Sady anombohan ?ireo fifaliana !
LAKOLOSIN ?NY NOELY
Maneno indray ny lakolosy Ka miantso hoe andao andao Fa efa teraka Jesosy Hamonjy izao tontolo izao
Asandrato ny hira fiderana Hobio ilay Jesosy Zaza Haleloia re hosanna Ho anao ry Avo indrindra
Ny anjely no milaza Ny nahateran ?ilay zaza Ary Betleheman ?I Jodia Hobio fa teraka ilay Mesia
Iny alina iny Alina mangina Iny alina iny Alina toa hira
Iny alina iny Teraka Jesoa Iny alina iny Ho an ?ny mpino koa
Iny alina iny Alin ?ny mpiandry ondry Iny alina iny Alina mahavonjy
Iny alina iny Taitra ireo Magy Iny alina iny Tonga mba hamangy
Iny alina iny Niseho ny anjely Iny alina iny Nandre ireo niely
Alina masina Ny nahaterahan ?ny Mpamonjy Niseho ny Anjely Tonga ny mpiandry ondry sy ny Magy
FETY TSY HADINOINA
Fety tsy hadinoina Ny andron ?ny Noely Ka dia mba hamasino Anio ry zazakely
Derao Jesosy zaza Tsarovana eto anio Samia mankalaza Fa Tompo Masina io
Mpamonjy nandradraina Nandrasana efa ela Tonga ka hajaina Jesoa Imanoela
He teraka ny Tompo Nahoraka eran-tany Ka tonga mba hanompo Reo zay nahare izany
Ndeha isik ?izao dia ?zao Mba hizaha ?lay vaovao Vaovao hafa kely ?Zay nambaran ?ny Anjely
Ao antranon ?omby, hono No mitoetra sy mifono ?Lay mpitondra famonjena Ho an ?ny isam-pirenena
Tsia rehefa vonona isika Vetivety dia tafita Ora vitsivitsy monja Dia indro fa ho tonga !
Koa aoka tsy himalo Fa angamba ?ray sy valo ?sika izao dia tomady Sady efa zatr ?ady
Bethleheman ?ny Jodia No izoran ?ito dia Mihirà sy mifalia Fa hahita ny Mesia !